Mucaaradka ugu xooggan ee Mibolerone (Hubso dhibcaha) online AASraw
/blog/Gallery/Maydka ugu xooggan ee Mibolerone (Hubso dhibcaha) internetka
Posted on 07 / 19 / 2018 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery. Waxay leedahay 0 Comment.
Wax kasta oo ku saabsan Mibolerone (Hubso dhibcaha)
1.Waa maxay Mibolerone (Hubso dhibco)?
2.Mibolerone Farmashiyaha Kooban
3.Mibolerone isticmaalka jirka jirka
4.Mibolerone (Dhibaatooyinka Baadhista)
5. Mibolerone nolosha nuska
7. Qaadashada Mibolerone
8.Mibolerone waxyeelo soo gaadha
9.Mibolerone dib u eegis
I.Mibolerone budada Calaamadaha aasaasiga ah:
Nooca Molecular: C20H30O2
1. Waa maxay Mibolerone (Hubso dhibco)?
Mibolerone(hubi dhibcaha, Cas No.3704-9-4) oo sidoo kale loo yaqaanno dimethylnortestosterone (DMNT), ayaa markii ugu horaysay lagu soo saaray 1963. Mibolerone waxaa laga iibsadaa Upjohn oo leh magac Tilmaame-barar ah "Check Drops" iyo "Matenon", si loogu isticmaalo daroogada caafimaadka xoolaha. Waxaa lagu tilmaamey mid gaar ah sida daaweynta afka ah ee looga hortago estrus (kuleyl) eeyaha dumarka ah (eyga mibolerone).
Mibolerone waa darajo xoolaad steroid anabolic taas oo lagu sii daayay 1960 by Upjohn oo ku hoos qoran magaca calaamadaha "Check Drops" iyo wixii ka dambeeya Hubi Eeg Cunta Cuntada leh (eyga mibolerone). Ujeedada steroidkani waa inay joojiso wareegga caadada ee eyga haween (eyga mibolerone) si looga hortago uurka. Sida hormoonada hormoonada anabolic steroid, iyo tan waxa ku jira fasalka xoolaha, ma ahayn muddo dheer ka dib markii la ogaaday in ciyaartoyda iyo jir-dhiseyaashu ay heleen isticmaalka (jirka jirka ee mibolererka).
Sharaxaadda Kiimikada Mibolerone
magaca Mibolerone, DMNT
Magaca calaamadda Hubi dhibcooyinka, Matenon, Hubi Cuntada Cuntada leh ee Cuntada leh
Formula kelli C20H30O2
Miisaanka kelli 302.45
Color Biyo cad ama midab cad
Ku saabsan isticmaalka qaabdhismeedka jirka ee mibolerone, mibolerone (Hubso dhibco) waa mid ka mid ah steroids ugu awoodda badan ee abid sameeyey. Sidoo kale waa mid ka mid ah steroids-ka ugu dhibaatada badan ee abid lagu sameeyay marka la eego saameynaha. Tani maahan steroid inta badan loo isticmaalo jimicsi jirka ah ama cayaaraha. Inta badan waxaad ku arki doontaa isticmaalka xaddidaadda tartanka horudhaca ama tartanka farsamada. Qaar ka mid ah jir-dhiseyaasha ayaa u isticmaali doona ka hor tartanka si ay u caawiyaan usbuucyada ugu dambeeya ama xilliga ka baxsan xilliga fasaxa dheeraadka ah, laakiin maahan wax caadi ah unug jirka jirka ah. Waxaan wax badan ka qaban doonnaa miboolerka ugu xooggan ee steroid ah (Hubi dhibcaha) sii wad.
2. Mibolerone Farmashiyaha Kooban
Xaggee Mibolerone? Sidee loo sameeyaa Mibolerone?
Sidii hore loo soo sheegay, Mibolerone waa anabolic-fasalka dhirta oo markii hore lagu abuuray 1960s shirkad la yiraahdo Upjohn. Inta lagu jiro muddadan, waxay laheyd magac rasmi ah Hubi dhibcooyin, laakiin ka dib, waxaa loo bedelay wax ka duwan: Eeg Egyaha Cunnada Cuntada leh (eyga mibolerone). Sababta asalka ah ee asalka ah ee steroidska waxaa loo sameeyey si looga hortago eyda haweenka ah ee uur qaadidda. Waxay si gaar ah u shaqeysay si loo joojiyo wareegga caadada ee eeyaha haweenka ah, waxayna ahayd mid aan caadi aheyn, sheyga loogu talagalay ujeedada caawinta kookaha. Si kastaba ha noqotee, sida daroogooyinka badan oo leh ujeedo, bini'aadan, gaar ahaan kuwa ku jira ciyaaraha fudud ee ciyaaraha iyo jidh-dhiska, waxay ka heleen inay faa'iido u yeeshaan sababo kale.
Ku saabsan sida loo sameeyo mibolerone (Kombiyuutarada eeg), mibolerone wuxuu la xiriiraa calaamado kale oo caan ah oo loo isticmaalo Nandrolone. Mibolerone waa aabol anabolic oo afka laga qaato, waxaana laga soo qaataa steroids kale, nandrolone. Tani dhab ahaantii waa isbedel ka yimid Nandrolone. Hubi dhibcaha waxaa abuuraya adigoo ku daraya mastar dheeraad ah oo ah methyl groupka 7th iyo 17th ee hormoonka Nandrolone. Kooxdan oo lagu daray 7th waxay ka dhigeysaa mid aad u awood badan marka loo eego saameynteeda asrogenic, waxayna ka hortagtaa 5-alpha reductase enzyme ka shaqeynta. Kooxda dheeraadka ah ee 17th waxay sidoo kale ilaalisaa hormoonka inay waxyeello soo gaarto muddada afka laga qaato. Sidaas darteed farsamo ahaan, waxaa loo tixgeliyaa steroid anabolic C17-alpha.
Iyada oo ay yar yihiin kuwan, isbeddelka caanaha iyo dhirta, waxay ka dhigaysaa awoodda hormoonka Nandrolone ee awoodda sare leh iyo awood xoog leh. Xaqiiqdii waxay noqon kartaa mid ka mid ah kuwa ugu awooda badan ee istiraatiijiyadeed ee loo yaqaan 'steroid androgens' weligiis abuuray, sidaa daraadeed, Upjohn waxay dhab ahaantii sheegtaa in Dhibaatooyinka Baadhitaanku ay qiyaastii lix jeer ka xoog badan yihiin testosterone iyo ku dhawaad ​​saddex jeer oo xooggan oo ka mid ah unugyada asrojiga ah. Dhab ahaan, waxay u muuqataa inay aad ugu xoog badan tahay kuwa sidan oo kale ah.
3. Isticmaalka jirka jirka ee Mibolerone
Mibolerone waxaa isticmaala jidh-dhisayaasha, kor u qaadayaasha korontada, dhiirigeliya cayaaraha iyo dagaalyahannada, dhamaantood ujeedada kordhinta gardarrada iyo waxqabadka maalinta tartanka. Mibolerone (Hubso dhibcaha) waxay waxtar leeyihiin marka la isticmaalo daqiiqado 30 ka hor tartanka. Isticmaaluhu wuxuu la kulmi doonaa gardarrada kordhaya, diiradda iyo wadada tartanka. Inkasta oo steroidkani aysan ku jirin wax kiciyeyaasha tooska ah, waxay muujinaysaa tallaabo aad u muuqata oo ku saabsan CNS (Nidaamka Dhexe Nervous) iyada oo loo marayo nooca xad-dhaafka ah ee iyorogen. Tani waa sababta kaliya ee daroogada loo isticmaalo ciyaartoyda, maadaama guulaha muruqyada aan la dabooli karin daawadan.
Mibolerone waa steroid afka laga qaato, qaabdhismeed laga soo qaatay nandrolone. Wakiilkan ayaa si gaar ah loo yaqaan nandrolone 7,17-dimethylated, wuxuu si weyn u xoogan yahay wakiilka anabolic iyo androgenic marka loo eego waalidkiisa aan la aqoon. Sanadihii la soo dhaafay, mibolerone wuxuu sumcad ku yeeshay dhexdhexaadiyeyaasha iyada oo ah mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan ee la sameeyey. Tani waa mid sax ah farsamo farsamo, maadaama ay tahay mid ka mid ah oo keliya qaar ka mid ah aaladaha wax soo saarka steroid oo saameyn ku leh microgram, ma aha milligram, qadar. Intii lagu jiray tijaabooyinka xayawaanka ee caadiga ah, mibolerone ayaa loo go'aamiyey in ay leeyihiin waqtiyo 41 dhaqdhaqaaqa anabolic ee methyltestosterone markii la bixiyay hadal ahaan. Marka la barbardhigo, waxay 18 ku jirtay keliya hawlaha asrojeniga. Inkasta oo labada guryaha si xoog leh loogu sheego wakiilkan, waxa ay haysaa dabeecadda ugu muhiimsan ee anabolic (dareenka qaraabo). Si kastaba ha ahaatee, guryaha loo yaqaan 'estrogenic and progestational properties' ayaa sidoo kale lagu qeexay daroogadaas. Ciyaartoyda ciyaartoyda waxaa inta badan lagu dabaqaa inta lagu guda jiro wejiyada culus ee tababarka, ama inay kiciyaan gardarrada kahor tababarka ama tartanka.
Mibolerone ma aha steroid inta badan loo isticmaalo jimicsi jirka ah ama cayaaraha.
4. Dhibaatooyinka Mibolerone
Shaki la'aan, sababaha aasaasiga ah ee Mibolerone (Check Drops) waa daroogada caanka ah waa sababtoo ah saameyntiisi aad u sareysa ee orrogenic, si kale haddii loo dhigo, awoodda lagu xoojinayo iyo xoojinta gardarrada. Tani waa sababta ay u tahay doorasho caan ah oo ah dagaalyahanno, cayaaraha cayaaraha, iyo cayaaraha xoogga leh. Kuwa loogu isticmaali karo heerar sarreeya, waa wax aad u muuqata waxa ay ku sameyn karto marka la eego saameynteeda; Tani waxay ka dhigeysaa mid aan fiicnayn oo waxtar leh. Ka soo horjeeda caqiidada caanka ah, inta badan steroids anabolic ma kordhin gardarrada. Sure, waxay kordhin karaan diiradda oo ay sare u qaadaan heerarka testosterone taasoo keeneysa feejignaanta iyo dhiirigelinta, laakiin illaa inta laysku haysto, gardarrada xanaaqa, daroogooyinka yar ayaa saameynaya Miberlorone. Gardarradu maaha wax xun, sidoo kale. Haddii aad tahay qof madax-madax ah, qof mas'uul ah, waxaad isticmaali kartaa isticmaalka weyn ee gardarrada marka la isticmaalo si habboon. Si kastaba ha noqotee, haddii qof uu leeyahay dabeecad xumo, waxay noqon kartaa go'aan aan mugdi ku jirin oo ay ku siiso ama u oggolaato inay isticmaalaan Mibolerone (Check Drops).
Sababta ugu weyn ee qofku u isticmaali karo noocyadan daroogada ayaa ah, mar kale, ujeedada kor u qaadida feejignaanta garashada iyo gardarrada oo horseedi kara dagaal ama qaar kale oo gaaban oo gaaban, nooc ka mid ah baahida loo qabo maskaxda. Waa cayaar aad u caadi ah in ay qaataan daroogada hogaamineysa dagaalka lagula dagaalamayo jiritaanka jimicsiga, laakiin kuwa jidh-dhisayaasha ayaa isticmaali doona dhammaadka diyaarinta cunto qaadashada si ay u helaan todobaadyada ugu dambeeya laga soo bilaabo aragtida fahamka. In bodybuilding, diyaarinta waa mid aad u adag, iyo toddobaadyadii la soo dhaafay kuwaas oo mararka qaar u muuqdaan inay ugu adag tahay, marwalba waa baahi loo qabo in qofkii ugu dambeeyey ee maskaxda ah, iyo Mibolerone (Check Drops) ay awoodaan inay sidaas sameeyaan. Waa in la ogaadaa in isticmaalka joogtada ah uu u horseedi karo aromatization qaar, si kastaba ha ahaatee, markaa haynta biyaha waa suurtagal. Taasi waxay tidhi, waa wax la kontarooli karo mana aha mid aad u ballaadhan marka la barbardhigo dhinacyada kale ee u diyaar garoobaya.
Marka la eego, Mibolerone ("Drops") waa daroogo u yeelanaya qaar ka mid ah waxyaaba badan oo anabolic, laakiin sababta oo ah sida ay halis u tahay caafimaadkaaga, waxay gebi ahaanba ka dhigaysaa inaan macnaheedu ahayn isticmaalka daroogada ugu horreyn ujeedadaas. Taasi waxay tiri, qofku wuu ka fiicnaanayaa oo kaliya inuu ujeeddo gardaro ah, mar labaad, taasi dhab ahaantii waa sababta kaliya ee loo qaadan karo sida ay khatar ugu noqon karto siyaabo badan oo kale.
Mibolerone (Dhibaatooyinka Baadhitaanka) waxay leeyihiin nus nus saacadood oo ah 4 (nolosha nuska mibolerone), taas oo ah mid gaaban (waqtiga ka dambeeya daroogada iyo saameynteeda ay ka tagaan jirka qofka isticmaala). Tani waa sababta cayaartoyda loogu talagalay in ay isticmaalaan daqiiqado 20 ilaa daqiiqado 30 ka hor waqtiga ay u baahan doonaan boosteejada.
6. Wareega Mibolerone
Ma jiraan wax caddayn dhab ah oo aan dhicin ama haddii kale ciyaartoyda ay isticmaalayaan Isticmaal dhibcaha "wareega" (wareega mibolerone) sida ay caadi u tahay steroids kale. Waxay u muuqataa in steroid-ta ay xaddidan tahay codsi adag oo ah mawduuca horay loo soo doortay ee loo yaqaan "steroid pre-event" oo loogu talagalay in la kordhiyo gardarada iyo tartanka tartanka. Si kastaba ha noqotee, wax guuldarro ah oo ku yimaada maskaxda ayaa lagu gaari karaa daroogada sababtoo ah xaqiiqda waxaa loo isticmaali karaa kaliya gaaban 2 isbuucyada yar yar ee qiyaasaha mibolerone yar. Wakhti kasta oo dheeraad ah, ama qiyaasta culus, iyo welwelka caafimaadka ayaa ah kuwo dhow.
Mibolerone waxaa badanaa loo isticmaalaa daqiiqado 30 ka hor tartanka, sababtoo ah daroogada ayaa ku jira nolol yar oo mibolerone ah. Habka loo qaato daawadani waa sublingual cuncun, taas oo ah kiniin Mibolerone oo hoos timaadda carrabka. Habkani wuxuu u oggolaanayaa inuu helo gardarrada degdegga ah iyo kororka xoogga. Tallaabada daroogada waxay ku dhammaaneysaa saacadaha 4, ka dibna walaxda ayaa laga saaraa jirka aadanaha.
Qiyaasta miboloneone caadi ah waxay ku saabsan tahay 5 mgs of Mibolerone in la qaado daqiiqado 30 ka hor xilli muhiim ah ee tababarka ama tartanka. Caadi ahaan, daroogadan ayaa kali ah, looma baahna wareega mibolerone, iyadoon wax la qabin daawooyinka kale.
Guud ahaan, si ka duwan kuwa kale daawooyinka anabolic, Mibolerone (Hubso dhibcaha) aan loo isticmaalin muddada wareegga. Tani waa kaliya steroid-ka hor-dhac dhacda taasoo ka dhigaysa gardarrada iyo tartanka tartanka adag. Qalabka gaaban ee maamulka iyo qiyaasta yar ee mibolerone ayaa ka dhigaya isticmaalka Mibolerone ee murqaha helaya cufnaan badan. Dhinaca kale, qaadashada waqti dheer ama qiyaasta mibolerone sare waxay kor u qaadi kartaa dhibaatooyinka caafimaadka. Maadaama Mibolerone kala badhkeedu yahay mid gaaban, daroogada waa in la qaato daqiiqado 30 ka hor tartanka.
Haddii aad runtii u baahan tahay inaad qaadato dawadan, waxaad ka iibsan kartaa miboloneoonka internetka boggeena internetka www.aasraw.com, laakiin ha ilaawin inaad qaadatid hepatoprotors si loo yareeyo tallaabada sunta ee Mibolerone.
8. Dhibaatooyinka Mibolerone
Dhibaatooyinka Mibolerone waa tiro badan. Tani waa mid ka mid ah steroidska ugu awoodda badan iyo halista ugu badan ee anabolic anomalia. Sababtoo ah saameynaha mibolerone waa mid aad u xoog badan, tani maaha qof nadiif ah oo aan waligiis isticmaalin. Waxaa jira dhowr fursadood oo ka fiican. Weerarka sii kordhaya ayaa sheegaya in ka hor inta aan la dagaallami kareynin jahwareerka, hase yeeshee khataraha badanaaba waxay ka badan doonaan abaalmarinta steroidkan. Tani macnaheedu maaha in qofku u dhiman doono, waxaana suurtogal ah in saameynaha mibolerone ee laga yaabo in laga fogaado heerka (ma laga wada saari karo dhammaanba).
Mibolerone waxaa la yareeyaa jidhka, waxaana loo tixgeliyaa steroid aad u sareysa esteemi ah taasoo u sabab ah isbedelka 7,17-dimethylestradiol (oo ah estrogen oo leh firfircoonida bayoolojiga sare). Ginecomastia waxaa laga yaabaa inay tahay arrin walaac leh xilliga daaweynta, gaar ahaan marka la isticmaalo qiyaasta daaweynta caadiga ah ee caadiga ah. Isla mar ahaantaana biyo qabista waxay noqon kartaa dhibaato, taasoo keenaysa luminta maskaxda ee qeexida muruqyada iyada oo labadaba sii deynaya biyaha iyo hoos u dhigista biyaha. Si looga hortago saameyno saameyn leh estrogenic xoog leh, waxaa laga yaabaa in lagama maarmaan u ah isticmaalka daawada ka hortagga-estrogen sida Nolvadex®. Mid ka mid ah waxaa laga yaabaa inuu mar kale u isticmaalo aromatase inhibitor sida Arimidex® (aastozole), taas oo ah xeel dheer oo wax ku ool ah ee xakamaynta estrogen. Si kastaba ha ahaatee, carbuuniyeyaasha aromatase, waxay noqon karaan kuwo qaali ah marka la barbardhigo daaweynta celceliska qiyaasta daaweynta estrogen, waxayna sidoo kale saameyn taban ku yeelan kartaa lipids dhiig.
Waa feejignaan in mibolerone uu sidoo kale muujiyo dhaqdhaqaaq adag sida progestin ee jirka. Dhibaatooyinka soo raaca ee progesterone waxay la mid yihiin kuwa ku jira estrogen, oo ay ku jiraan jawaab celinta diidmada ee wax soo saarka testosterone iyo xajmiga kaydinta dufanka. Progestins waxay sidoo kale kordhisaa saameynta kicinta ee estrogens ku koritaanka unugyada naasaha. Waxaa muuqata in uu yahay isbeddel adag oo udhexeeya labadan hormood halkan, sida ginecomastia laga yaabo inay xitaa ku dhacdo caawimaadyada progestins iyada oo aan lahayn heerarka qiyaasta estrogen ee joogitaanka. Isticmaalka antiestrogen-ka, kaas oo xakameynaya qaybta estrogenic ee cudurkan, ayaa badanaa ku filan in la yareeyo ginecomastia ay keento mibolerone.
Dhibaatooyinka soo raaca ee mibolerone waxaa ka mid ah finanka, koritaanka timaha jirka iyo timaha luminta ragga oo ku fekeraya in ay noqdaan xayawaan muuqaal ah. Dhibaatooyinka soo raaca ee mibolerone ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku jiraan calaamadaha fayraska ee haweenka; Xaqiiqdii, fuuq-baxa heerkulka qaarkood waa la hubaa.
Dhibaatooyinka soo noqnoqda ee Mibolearone - Daaweynta wadnaha:
Mid ka mid ah siyaabaha ugu xun ee lagu baabi'in karo nidaamka wadnahaaga ayaa ah inaad qaadato Mibolearone. Markaad qaadatid, waxay doonayaan inay sameeyaan heerarka baruurta, gaar ahaan kolestaroolka xun, u gudba saqafka. Waxa kale oo ay dooneysaa in ay ka dhigto dhibaatooyinka wadnaha ee ka sii daraya. Dhamaan kuwan maskaxda ku hay markaad isticmaasho Mibolearone. Waa inaad cuntaa cunto caafimaad leh oo taageera caafimaadka wanaagsan ee wadnaha, taasoo macnaheedu yahay in badan oo ka mid ah asiidhyada duxda ee omega, sonkorta fudud oo fudud iyo dufanka saturated oo yar. Marka laga reebo caadooyinka cuntada wanaagsan, jimicsiga jimicsiga oo adkeynaya kaararka ayaa sidoo kale muhiim ah. Haddii aad tahay qof ku habboon sharaxaadda hadda la soo sheegay, waa inaad si fiican ula qabtaa Mibolearone.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay qof leh muuqaal qalafsan oo wadnaha ah, kani waa daroogo kale oo aanad isku dayin inaad qaadato. Xaalad kaliya, waxaad sidoo kale qaadan kartaa dheecaan antioxidant si aad u eegto oo kaliya in labadiinuba dhan yihiin marka la isticmaalayo.
Waxyeellooyinka soo noqnoqda ee Mibolerone-Hepatotoxicity:
Mibolerone waa maaddada c17-alpha alkylated. Isbeddeladani waxay ka ilaalisaa daroogada inay ka joojiso beerka, taas oo u oggolaanaysa boqolkiiba sagaashan sare ee daroogada gelitaanka dhiigga ka dib markii maamulka afka laga qaato. Caabuqyada anabolic / androgenic-ka ee C17-alpha ayaa laga yaabaa inay noqoto hepatotoksik. Baaxad aad u dheer ama aad u sarreeya waxay keeni kartaa dhaawac beerka. Marar dhif ah waxaa dhici karta in xaalad nolol-halis galin karta. Waxaa lagugula talinayaa inaad booqato takhtar si joogto ah inta lagu jiro wareeg kasta si loo kormeero shaqada beerka iyo caafimaadka guud. Qaadashada steroids c17-alpha alterated steroids badanaa waxay ku kooban tahay usbuucyada 6-8, si loo ilaaliyo culeyska beerka. Dhibaatooyinka beerka oo aad u daran ayaa dhif ah oo la siiyaa dabeecadda caadada ah ee dadka badankood isticmaalaan stabdhab anabolic / androgenic, inkastoo aan laga saari karin steroidkan, gaar ahaan qiyaaso badan iyo / ama muddo dheer oo maamulka ah. Ogsoonow in macluumaadka qoraaga Maraykanka ee mibolerone uu ku sheegay keliya hal daraasad bani'aadan ah oo lagu sameeyo mibolerone, iyo in daraasaddan la joojiyay horraantii sababtoo ah hepatotoxicity sare.
Isticmaalka dheeraadka ah ee beerka ka-soo-saarka sida "Stabil", Liv-52, ama Essentiale Forte ayaa lagula talinayaa inta la qaadanayo steroids anabolic hepatotoxic.
Dhibaatooyinka Mibolerone-Baaritaan Astaamaha:
Mibolerone wuxuu si ba'an u xakameynayaa waxsoosaarka caadiga ah ee testosterone.
Waxyeellooyinka soo gaadhay Mibolerone-Waxyaabaha kale:
-Ku hurdo hurdo ama hurdo la'aan
-Kulalkaaga dhaqdhaqaaqa mindhicirka
-Kulalka indhaha ayaa bilaabaya inuu huruud noqdo
- Cadaadiska dhiigga
-In la joojiyo wareegga caadada haweenka
-Dirbidda xubinta taranka haweenka iyo ballaarinta xayawaanka ee dumarka
-Dirinta codka haweenka
- Waxay kordhisaa khatarta kufsiga miyoogada
- Waxaa si xun u saameeya cudurka triglycerides
- Waxay si weyn u yareyneysaa nasinta niyadjabka
9. Dib u eegista Mibolerone
Hubi dhibcaha, magaca mibolerone magaciisa, CAS No.3704-9-4, waxaa markii hore loo soo saaray sidii gargaar loogu hayn lahaa eeyaha haweenka ah ee kuleylka u galaya. Si kastaba ha ahaatee, farsamo ahaan waa la tixgeliyaa, iyo sidoo kale, mibolerone sidoo kale waa mid aad u sareeya kaas oo ah qaabka saameynta ay ku leedahay eyga haweenka. Xaqiiqdii, mibolerone wuxuu leeyahay labo jeer oo qotodheer u ah daaweeynta progesterone sida progesterone lafteeda. Daroogadaasi waxay sumcad u leedahay inay noqoto steroid aad u xoogan oo ku habboon boodhka iyo si weyn u kordhaya gardarrada. Daawadani waa nooca 19 ee bolsterone iyo sida nandrolone uu yahay mid awood badan iyo ka sareeya testosterone, sidaa daraadeed kiiska mibolerone marka loo eego bolasterone. Isugeynta methyl group ee C-7 ma aha oo kaliya kor u qaada dhaqdhaqaaqa AR iyo PR laakiin sidoo kale waxay kordhisaa sunta maaddada molecule. Mibolerone waa nooc ka mid ah nortestosterone (nandrolone); Si kastaba ha ahaatee, looma dhicin metabolitir xoogan oo dihydronandrolone ah sababtoo ah saameynta gaashaanka ee 7-alpha methyl group.
Mibolerone oo loo tixgelinayo inuu yahay steroid ugu awoodda badan oo soo saara natiijooyinka la rabo ee waqti gaaban. Hase yeeshee, tani waa kaliya haddii steroid loo isticmaalo xaddiga qiyaasta saxda ah, waqtiga xadidan, iyo sida haboon.
Tani waa sababta oo ah qiyaasta mibolerone waxaa loo qorsheeyay ka dib khibrad shaqo iyo cilmi-baaris fara badan. Dhammaan, sheyga waa mid dhab ah oo hufan, laakiin waa in loo adeegsadaa taxadar wayn.
10. Soo iibso Mibolerone online
AASraw waa warshad caan ah oo bixisa noocyo badan oo steroids budada ah oo duuban online, siinta mibolerone iibka online, sababtoo ah Upjohn joojiyay soo saaro dhibcaha Hubi dhawr sano ka hor, sidaas ma aha dhalooyin badan (haddii wax kasta oo dhan) jira badeecada asalka ah by Upjohn. Inkasta oo Dhibaatooyinka Baadhitaanku ay adag tahay in ay yimaadaan, waxaa jira noocyo badan oo dhulka hoostiisa ah oo mibolerone ah oo ku jira badeecooyin laga yaabo in laga dalbado suuqyada dhulka hoostiisa. Qiimaha wuu kala duwanaan karaa, laakiin, dhammaadka, mg mg per mg waa maadada qaaliga ah oo qaali ah marka la barbardhigo dadka kale sida Deca Durabolin iyo Dianabol. So shaybaar badan oo dhulka hoostiisa ah ayaa iibsanaya mibolerone cayriin ah si loogu iibiyo internetka si ay u sameeyaan wax soo saar.
Tags: iibso budada Mibolerone, Budada Mibolerone
Tykerb (231277-92-2) -Kulinka dilaha naas-nuujinta MAGL waxqabadka JJKK-048 online-ka ah